MACLUUMAADKA TARANKA EE SHIINAHA SHAR-PEI DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
2-sano jir ah Shar-Pei Bero oo ka yimid Babrungo (Boomer), Kaunas (Lithuania)
Liiska eeyaha Shar-Pei Mix eey
Shiinaha-Shar-Pei waa eey weyn oo maqaar duuban leh. Waxay leedahay muuqaal laba jibbaaran oo leh madax ballaaran oo fidsan. Afka waa balaaran yahay, cufan yahay oo buuxa, oo leh joogsi dhexdhexaad ah. Sida oo kale Chow Chow , eeyahaani waxay leeyihiin af buluug-madow ah. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Indhaha yar yar, qoraxdu ka muuqato, ee yicibta u eg ayaa mugdi ah, laakiin waxay ku fududaan karaan eeyaha leh jaakad midab khafiif ah leh. Dhagaha dhegaha-sare, saddex-geesoodka ah ayaa aad u yar oo xoogaa wareegsan talooyinka. Dabada ayaa qaro weyn salka ku haysa, iyada oo ku dhajisanaysa meel ganaaxan oo aad u sarreeysa. Mararka qaarkood waxaa soo saara goynta Labadaba eeyo aad u duudduuban oo madaxyo waaweyn leh iyo eeyo madax yare oo leh maqaar aad u muuqaal eg ayaa ku dhaca noocyadan. Eydu waxay leeyihiin laalaab ka badan kuwa waaweyn. Shar-Pei wuxuu si tartiib tartiib ah u lumiyaa laalaabkooda markay sii gaboobaan. Waxaa jira saddex nooc oo jaakad ah: jaakad faras ah, burush-jaakad iyo jaakad dhif ah oo naadir ah, taas oo aysan aqoonsanayn AKC. Koodh-xidhashada kuma dhacayso heerka AKC-da maxaa yeelay khaasatan Shar-Pei waxay leedahay jaakad hoose iyo joodar ka sarreeya 1 inji. Aragtida caanka ah ee ku saabsan beedka-dharka ayaa ah inay 'dib u celin' u tahay Chow-Chow. Runtii waa dad caan ah sida tayada xayawaanka loo yaqaan Shar-Pei, in kasta oo ay dhif tahay, oo inta badan ay ku wareersan yihiin Chow milkiilayaasha aan aqoon iyo sidoo kale shaqaalaha ka shaqeeya xayawaanka. Koodhka faraska ee aan caadiga ahayn waa mid adag oo taabashada ah, oo aad u jilicsan oo taagan. Noocyada burushka lagu daboolay ayaa leh timo dheer iyo dareen jilicsan. Koodhka dhammaan noocyada wuxuu noqon karaa dherer hal inji ah. Midabada koofiyaddu waxay ka kooban yihiin dhammaan midabada adag iyo sabuurada. Waxa kale oo jira jaakad shar-Pei ah oo hoos loo dhigay, midab leh oo midab leh (ubax leh), taas oo ah cilad u qalmin giraanta bandhigga sida waafaqsan heerka AKC.
Shar-Pei wuxuu aad ugu daacadsan yahay cidda maamusha. Caqli ciyaar leh, firfircoon, awood badan, geesi ah, Waxay xiriir la leedahay qoyskeeda, laakiin maahan saaxiibtinimo shisheeyaha. Haddii eeygu la kulmo bisadaha iyo carruurta inta uu yar yahay, badanaa wax dhibaato ah kalama kulmayo iyaga. Shiinaha Shar-Pei waa mid sahlan, deggan, madaxbannaan oo daacad ah. Waxay ka dhigtaa wehel farxad leh iyo ilaaliye wanaagsan. Shar-Pei wuxuu u baahan yahay ilaaliye kalsooni leh. Haddii aadan hubin, iswaafaqsaneyn, aad u jilicsan ama fudeyd indhaha eyga, waxay la wareegeysaa xilka madaxnimo. Shar-Pei wuxuu ubaahan yahay shirkad awood leh, laakiin debecsan, awood xad dhaaf ah leh. Eyga waa in la baro dhammaan bini-aadamka oo dhan isaga ayaa ka sarreeya sida ay u kala horreeyaan. Kuwa iyagu isu arka inay kor yihiin aadanaha noqon doonaa madax adag oo geesinimo leh. Noocani wuxuu u baahan yahay tababar addeecid adag si loo dhiso hoggaamintaada. Way diidi karaan amarrada xubnaha qoyska ee aan iyagu hoggaanka u dhisin. Waxay u baahan yihiin milkiile awood u leh inuu noqdo hogaamiye . Shar-Pei guud ahaan ma jecla biyo oo inta badan wuxuu isku dayaa inuu iska ilaaliyo. Noocani waa mid aad u nadiif ah oo ka mid ah taranka fudud ee burburka guriga . Isku darka eeyaha kale mararka qaar waxay noqon kartaa dhibaato haddii mid ka mid ah eeyaha uu soo bandhigayo dabeecado ku badan. Bulsho waa muhiim. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah Shar-Pei ayaa ka awood yar ka dib kuwa kale waxayna muujinayaan khadadka inay noqdaan kuwo aan badnayn eeyaha, oo si fiican ula qasmaya eeyaha kale. Qaar ka mid ah Shar-Pei waxay u muuqdaan kuwo caajis ah, gaar ahaan markay xanuun dareemaan. Waxaa muhiim ah in la helo abuure sumcad leh markaad raadineyso Shar-Pei. Noocani wuxuu caan ku ahaa 1980-meeyadii. Waxaa loo gudbiyay mid ka mid ah 'Yuppie Puppies,' oo macnaheedu yahay inay ahayd mid ka mid ah noocyada sida taxaddar la'aanta ah loo badiyay. The dabeecadda eyga waxay kuxirantahay sida milkiiluhu ula dhaqmo eeyga. Eeyaha loo oggol yahay inay rumaystaan ​​inay yihiin madaxa dadka ayaa horumarin doona arrimaha dhaqanka. Eeyo aan loo qaadan xirmo xirmo maalinle ah sidoo kale waxay bilaabi doonaan inay soo bandhigaan heerar kaladuwan oo arrimo ah.
Dhererka: 18 - 20 inji (46 - 51 cm)
Miisaanka: 40 - 55 rodol (18 - 25 kg)
U nuglaanta shaqada kelyaha (amolydosis) taas oo keenta qandho iyo xannuun barar. Mid ka mid ah fikradaha khaldan ayaa ah in Shar-Pei ay dhibaatooyin xagga maqaarka ah ka haystaan ​​duuduubkooda. Haa, qaar ka mid ah Shar-Pei waxay leeyihiin dhibaatooyin maqaarka ah, laakiin maahan sababta oo ah eeyga oo laalaabku leeyahay, laakiin waa xaalad la iska dhaxlo. Sababtoo ah caan ka noqoshada 1980s, qaar ka mid ah Shar-Pei waxay leeyihiin dhibaatooyin maqaarka la iska dhaxlo. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka iibsato breed a sumcad leh, xaaladdan waa inaysan noqon wax dhibaato ah. U janjeera burooyinka unugyada . U hubso inaad heshid breed kaas oo ku dadaalaya eeyaha caafimaadka qaba.
Shiinaha-Shar-Pei wax fiican kuma qaban doono guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Si dhexdhexaad ah ayuu gudaha ugu shaqeeyaa waxna wuu ku fiicnaan doonaa la'aan deyr.
Shar-Pei wuxuu u nugul yahay cimilada diirran, qayb ahaanna waxaa ugu wacan laalaabkiisa madaxa ku haya kuleylka.
dahabi dahab ah eyda buurta bernese
Maalmaha kulul hooska had iyo jeer waa in la bixiyaa. Biyaha waa in la helaa markasta. Haddii ay helaan jimicsi ku filan, waxay noqon doonaan kuwo nabdoon gudaha.
Shiinaha Shar-Pei wuxuu leeyahay baahi weyn oo jimicsi ah, oo ay ku jiraan maalin kasta socod . Intii socodka lagu maqnaa, eeyga waa in laga dhigaa ciribta cirif ama dhabarka qofka haya hogaaminta, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha hogaaminayo wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Ha ku dhaafin jimicsiga kuleylka, maadaama ay xasaasi u yihiin.
Ilaa 10 sano.
Shar-Pei waa in si joogto ah loo cadaadiyo. Dharkooda marna lama jarin. Noocani malaha jaakad hoosaad. Koodhka 'baadiyaha' wuxuu daadiyaa sanad yar, laakiin koodhka 'faraska' wuxuu u eg yahay inuu daadiyo oo keliya inta lagu jiro muddooyinka dhalaalida. Molshaha ayaa laga yaabaa inay uga tagto eeyga isagoo u muuqda inuu muuqdo. Maydhashada qiyaastii hal mar usbuucii iyo cadayga jaakada maalin kasta inta lagu jiro mudadan waxay meesha ka saari doontaa timo duug ah oo duug ah waxayna u oggolaan doontaa jaakad cusub inuu ku soo baxo.
Abtirsiimada Shar-Pei lama hubo. Sawirro ku yaal dheriga dhoobada waxay soo jeedinayaan in taranka uu jiray xitaa wixii ka dambeeyay 206 BC. Waxay noqon kartaa farac ka mid ah Chow Chow si kastaba ha noqotee, xiriirka kaliya ee u dhexeeya labada taranka waa carrabka guduudan. Magaca 'Shar-Pei' macnaheedu waa jaakad ciid ah. Eeyaha waxaa loo adeegsaday eeyo badan oo shaqooyin u ah Shiinaha, ugaarsiga, daba galka, sida jiirka, dhaqashada, ilaalinta kaydka, iyo ilaalinta guriga iyo qoyska. Eeyaha ayaa si farxad leh u shaqeynayay maalintii oo dhan. Waxaa sidoo kale loo adeegsaday dhacdooyinka dagaalka eeyga halkaasoo maqaarka dabacsan iyo jaakad aad u fara badan ay ku adkeysay eyga kale inuu qabsado. Shiineysku waxay rumeysnaayeen in sawirka duuduubka iyo afka madow ee midabka madow ay cabsi gelin doonaan jinni kasta oo shar leh. Intii lagu gudajiray kacaankii shuuciga Shaaricii tirada yarayd. Sannadkii 1973 ganacsade reer Hong Kong ah oo lagu magacaabo Matgo Law ayaa helay in yar oo eeyahaas ka mid ah isagoo isku dayaya inuu badbaadiyo taranka. Wuxuu ku soo jiitay indhaha dadka iyada oo loo marayo majallad Mareykan ah. Kuwaas yar ee ey ka kooban yihiin tirada-Shar-Pei aad ayey sare ugu kacday oo hadda waa mid ka mid ah noocyada caanka ah ee ku nool Mareykanka. Shiinaha Shar-Pei waxaa markii ugu horreysay aqoonsaday AKC 1992. Noocani wuxuu leeyahay in ka badan 70,000 eeyo ah oo u diiwaangashan kayd aasaasi ah.
'Tani waa gabadhayda quruxda badan ee 6-bilood jirka ah ee cas Pei loo yaqaan Shiinaha.'
Bailey T. oo laba jir ah ayaa ku nool Mechanicsburg, PA. Bailey wuxuu kasbaday Canine Good Citizen (CDC) iyo Therapy Dog International Titles (TDI).
Kani waa 10-toddobaad Dobramil Fu Chou, oo ay leeyihiin R. & M. Vance, c / - Chienparadis Dogue De Bordeaux.
Phoebe the Bear waa tusaale ka mid ah orso-go 'Shar-Pei
teacup retriever dahabi ah oo buuxa
Earl the Shar-Pei oo 1 jir ah— 'Earl waa caasinimo iyo madax adag , laakiin daacad ah oo jacayl leh. Tani waa Earl nasasho. Wuxuu ku nool yahay Australia '
'Miss Maddy Kay waa soooooo waxaa ka buuxa jacayl wax bixinta iyo helitaanka labadaba. Maddy waa eey badbaadin ah waxayna si buuxda isugu mashquulisay nolol cusub aniga. Waxaan qabanay howl 'mission' ah waxaanan kaqeyb qaadanay barnaamijka 'Read' ee iskuulada fasalada iyo isbitaalada. Maddy wuu jecel yahay carruurta wuxuuna ceyrsanayaa balanbaalista. Iyadu waa uun noole gaar ah — waxaa guriga ku jira laba kooto oo loo tababbaray inay si naxariis leh ula falgalaan iyo sidoo kale laba qoolley oo hore. '
Miss Maddy Kay the Chinese Shar Pei oo ku raaxeysanaya xeebta
'Sophie waa madow Shar-Pei oo halkaan lagu muujiyey isagoo yar oo 5 bilood jir ah. Waxay leedahay shaqsiyad badan wax walbana aad ayey uga fikirtaa. Waxay jeceshahay inay cayrsato labada bisadood ee aan hayno (oo waliba iyadu ay ceyrsadaan) oo ay ku ciyaarto kubbadaha ay ku ciyaaraan. Sophie waxay leedahay tamar badan laakiin waxay u isticmaashaa tamarta deg deg deg deg ah marki ay qarash gareyso, waxay kusii gudbi doontaa dabaqa jikada qabow saacad. Waxay noqon kartaa madaxnimo waana gabadh aad u yar oo amiirad ah, laakiin taasi kama hor istaageyso inay noqoto mid aad u jecel oo kalgacal leh. Sophie xitaa waxay lahadashaa buuqyo kaladuwan! Runtii iyadu waa sida a qof yar oo dhogor badan . Ka dib markii saaxiibkeygii ugu fiicnaa u dhintay leukemia daran, a shukulaatada labrador oo magaceeda la yiraahdo Molly, oo noloshayda badbaadisay ka dib markii aan labadeenaba shil baabuur xun ku jirnay, aad ayaan u burburay oo ma aanan doonayn eey kale. Sophie waxay ka soo horjeeday Molly, laakiin ma sii jeclaan karin iyada. '
Titus the Chinese Shar Pei puppy at 4 bilood jir— Kanu waa Tiitos. Isagu waa eeyga qoyska markaan dhaho reerka, hooyaday, aabbahay iyo sodohday waxay ugu yeeraan awowgood. Isagu waa arday caan ah. Isagu waa mid firfircoon oo jecel inuu ku ordo wadada kubada cagta. Waxaan haystaa 4 carruur ah waxayna ka yar yihiin 10 isaga aad buu ugu fiican yahay hareerahooda. '
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Shiinaha Shar-Pei
Macluumaadka Shiinaha Shar-Pei
Sawirada Shiinaha ee Shar-Pei 1
Sawirada Shiinaha ee Shar-Pei 2
Sawirada Shiinaha ee Shar-Pei 3
Sawirada Shiinaha ee Shar-Pei 4
Eeyaha Shar-Pei: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
xadka collie / aussia
mini shih Australiyaanka isku darka SUNTZU
noocee eey ahayd hooch
jaakad isku-dhafan oo jaakad isku-dhaf ah
bakoorad corso ey ey info